Jessie, YK Aluminium မှစာရေးသူ
Die Casting အတွက် ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်
သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အသေခံသွန်းလုပ်သည့်ဒြပ်စင်များ၏ ဒီဇိုင်းသည် သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ဒြပ်စင်များ၏ နံရံအထူကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။, သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဒြပ်စင်များ၏ အသားလွှာနှင့် ပုံသွင်းသည့်ထောင့်, အားဖြည့် နံရိုးများ, အပေါက်များကြားရှိ အနိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးနှင့် အသေခံသတ္တုများပေါ်ရှိ အပေါက်များ, ထိုကြောင့် သေသပ်ခြင်းတွင် စတုဂံအပေါက်များနှင့် အပေါက်များ […]
လျှောက်လွှာ3စျေးကွက်တွင်စီးရီးလူမီနီယံပြား
3 စီးရီးလူမီနီယမ်အလွိုင်းကို အလူမီနီယမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းဟုလည်း လူသိများသည်။. မန်းဂနိစ်ပါဝင်မှုများသည်။ 1-1.5%. ၎င်းသည် သံချေးမတက်နိုင်သော အလူမီနီယံအလွိုင်းစီးရီးဖြစ်သည်။. စီးရီး၏ခွန်အား3အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသည် သန့်စင်သော အလူမီနီယမ်အလွိုင်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။, စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် အပူကို ကုသ၍မရပါ။, ဒါပေမယ့် အေးပြီးရင် အလုပ်လုပ်တယ်။ (အအေးလူး) နှင့် […]
ဆိုင်းဘုတ်များအတွက် အလူမီနီယံပြားများ၏ အားသာချက်များ
ထုတ်ကုန်များထဲတွင်သတ္တုဆိုင်းဘုတ်များရှိသည်, အလူမီနီယံဆိုင်းဘုတ်များသည်အကောင့်ထက်ပိုများသည် 90% သတ္တုလက္ခဏာများ. ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်, ဆိုင်းဘုတ်များပြုလုပ်ရန်အလူမီနီယံပြားများကိုအသုံးပြုထားသည်, အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အလူမီနီယံပြားများသည် အလှဆင်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အရှိဆုံးဖြစ်သည်။. မျက်နှာပြင်အလှဆင်ခြင်းနည်းပညာများစွာကို အလူမီနီယံအပေါ်တွင် အသုံးချ၍ အသုံးချနိုင်သည်။. ဂရန် […]
ဒီနေ့, လူမီနီယံလုပ်နိုင်တဲ့, သတ္တုကွန်တိန်နာထုပ်ပိုးတဲ့အဖျော်ယမကာ, ၏သမိုင်းရှိပါတယ် 61 နှစ်များ, အလွန်ရင့်ကျက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်အတူ. ပူပြင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့, ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းဘီယာသို့မဟုတ် carbonated အချိုရည်ချ gulp သောအခါ, ရောင်စုံလူမီနီယံသံဗူးများတွင်အပြောင်းအလဲမရှိသောကွက်လပ်များမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိလိမ့်မည်! ဟုတ်ကဲ့, ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်စွမ်းရည်နှင့်ပြွန်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအလူမီနီယမ်သံဗူးအလွိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, နိုင် [...]
ဖောက်ထားလူမီနီယံပန်းကန် (punched aluminium plate ဟုလည်းခေါ်လေ့ရှိသည်) ညှပ်ခြင်း (သို့) လွှင့်ခြင်းမှတဆင့်သန့်စင်သောအလူမီနီယမ်သို့မဟုတ်လူမီနီယံအလွိုင်းပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောယူနီဖောင်းအထူရှိသောစတုဂံပုံကိုရည်ညွှန်းသည်. ဖောက်ထားသောအလူမီနီယံပြားကိုဟိုတယ်များတွင်သုံးနိုင်သည်, စားသောက်ဆိုင်များ, ရုပ်ရှင်ရုံ, ရုပ်သံလွှင့်ခန်းများနှင့်အခြားအများသုံးအဆောက်အ ဦး များနှင့်အလယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့်အရပ်ဘက်အဆောက်အအုံများကိုတိုးတက်စေရန် [...]
အဆက်မပြတ်ပုံသွင်းခြင်းနှင့်လှိမ့်ခြင်းနည်းလမ်းဆိုသည်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်ပုံသွင်းခြင်းနှင့်လှိမ့်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံသွင်းခြင်းနှင့်ပုံပျက်ခြင်းပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်, ဒါက, လိပ်များနှင့်ပုံချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လိပ်များတစ်စုံ၏လည်ပတ်မှု၌ပြီးစီးသည်. အရည်အလူမီနီယံကိုအအေးခံပြီးခိုင်မာစေသည်, ၎င်းသည်ဖိအားအချို့နှင့်ဖိအားပေးခံရသည် [...]
လျှောက်လွှာ 6061 သင်္ဘောများတွင်လူမီနီယမ်ပြား
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, ထည်ပေါ့ပါးဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျင်မြန်စွာတီထွင်ခဲ့သည်, နှင့်သင်္ဘောစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်သိရသည်, ဒါကြောင့်ကုန်ကြမ်းအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်. လူမီနီယမ်ပြားအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်လာကြပါပြီ. လူတော်တော်များများကနားမလည်ဘူး. သင်္ဘောများသည်သံမဏိကို သုံး၍ မရပါ? စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင်အလူမီနီယမ်ကိုအသုံးပြုကြသည်. ဒါကအနိမ့်သိပ်သည်းဆကြောင့်ဖြစ်သည်, မြင့်မားသောခွန်အား, မြင့်မားခိုင်မာမှုနှင့်ချေးခုခံ [...]
Trailer နှစ်ဖက်အတွက် Sheet Metal သည်နောက်တွဲနှစ်ဖက်အတွက် sheet metal အကြောင်းပြောသောအခါ, ၎င်းကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် 5000 စီးရီး. လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, နောက်တွဲယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများစွာကသံမဏိပြားများကိုအသုံးပြုကြသည်, ဒါပေမယ့်အချိန်ပြီးနောက်, သံမဏိပြားများသည်သံချေးနှင့်ချေးများတတ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်, ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုတိုစေသည် [...]
အရောင် Coated လူမီနီယမ်ကွိုင် - အလူမီနီယံပန်းကန် (သို့) အလူမီနီယမ်ကွိုင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အရောင်တင်ခြင်းအရောင်ခြယ်ထားသောအလူမီနီယမ်ကွိုင်၏လက္ခဏာများ : 1. ကောင်းသော flatness, ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်ပုံပျက်ခြင်းမရှိပါ 2. ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အလှဆင်နိုင်သည် 3. ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း, အပူချိန်မြင့်တွင်ဖုတ်ပါ, high gloss ကာကွယ်မှုနှင့်အရောင်တည်ငြိမ်မှု 4. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မလွယ်ကူပါဘူး [...]
Color-coated aluminium coil သည် aluminium coil သို့မဟုတ် aluminium plate အပေါ်ယံလွှာနှင့်အရောင်ခြယ်ပြီးနောက်ထုတ်ကုန်ကိုရည်ညွှန်းသည်. အရောင်ခြယ်ထားသောလူမီနီယံကွိုင်များ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမျက်နှာပြင်နှင့်အရည်အသွေးသည်များစွာသောနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသူ၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်, လျှောက်လွှာကိုအထူးအာရုံစိုက်သင့်သည်. So, ဘယ်လိုသတိထားရမလဲ […]